YINI UKUFAKA EMAIL | Database lakamuva Lokuposa
Ikhaya » I-imeyili Database Blogs » imeyili Marketing » YINI UKUFAKA EMAIL
YINI UKUFAKA I-EMAIL UKUFAKA, NGANI KUFANELE KAKHULU UKUZE KWAKHO IBHIZINISI LAKHO LESISEKELA KANYE NOKUTHOLA KANJANI ISITOLO SAKHO SOKUthengisa?
Ngecebo elihle lokuthengisa nge-imeyili .
Yebo, lelo yikhono lakho elihle. I-imeyili yisiteshi sokuxhumana esikhethekile esisivumela ukuthi sisungule ubudlelwane obusondelene nabafundi bethu. Futhi yilokhu okuzoguqula ababhalisile bakho babe ngamakhasimende.
Namanje awukaqali ukuheha ababhalisile futhi ungathanda ukwazi ukuthi ungaqala kanjani? Ngabe usuyenzile kodwa awazi ngempela ukuthi uzokwenzenjani ngohlu lwakho? Noma vele uthumele izincwadi zezindaba ngoba ucabanga ukuthi uhlu lukulungele lokho?
Ngakho-ke, usomabhizinisi othandekayo uyazi, lokhu okuthunyelwe kungokwakho.
Ngizokukhombisa ukuthi ungathengisa kanjani ngama-imeyili akho noma ngabe awukathumanga eyodwa empilweni yakho.
Ngabe ufuna ukuthengisa?
Ngemuva kwalokho, ngilandele.
Kuyini ukukhangisa nge-imeyili futhi kungani kubaluleke kakhulu ebhizinisini lakho?
Bengilokhu ngithe futhi ngizokusho lokho uhlu lwababhalisile luyimpahla ye- # 1 yebhizinisi eliku-inthanethi . Umbhalisile umthengi wesikhathi esizayo wemikhiqizo nezinsizakalo zakho. Kuze kube manje, le ndaba icacile.
Inkinga iza ngokuhamba kwesikhathi, nalokho okufanele ukwenze lapho usunababhalisile bakho ohlwini lwama-imeyili. Inselelo ukuguqula labo bafundi babe ngamakhasimende. Futhi yilapho ukumaketha kwe-imeyili kuqala ukusebenza khona.
Uma ngibheka encazelweni yokumaketha nge-imeyili (futhi i-imeyili noma i-imeyili) ejwayelekile, njengaleyo ongayibona kuyo Wikipedia , asitholi imininingwane ethakazelisa ngokukhethekile
Thumela umlayezo wokuthengisa usebenzisa ngqo i-imeyili njengesiteshi
Futhi kuyenziwa? Ilokho kuphela? Kukhulunywa kakhulu ngokukhangisa nge-imeyili ukuthola ukuthi kufaka kuphela ukuthumela ama-imeyili kubabhalisile bakho?
Njengazo zonke izincazelo, ukubaluleka kwalokho okuchazwayo akuqondakali.
Inani lokuthengisa nge-imeyili ukuthi liyithuluzi lelo kusivumela ukuthi sisungule ubudlelwano beqiniso nababhalisile bethu ngendlela elula.
Cabanga okwesibili. Ekuseni, yini into yokuqala oyenzayo uma uhleli phambi kwedeski lakho?
Yize kunganconywa, okwenzayo ukubheka kubhokisi lokungenayo (nokuthi uma ungakaze wenze okunye).
Futhi lapho uhamba kuzo zonke izingqinamba, uzobona eyodwa ekuthandayo. Kufana nesifinyezo esikuvumela ukuthi ugxile ukunaka kwakho konke ku-imeyili. Futhi ngenkathi uyifunda, akukho okunye.
Ukuthola i-imeyili ebaluleke kuwe inguqulo yanamuhla yokuthola incwadi ephepheni. Uyakhumbula ukuthi yayibaluleke kanjani? Inkinga ukuthi i-imeyili ayifani ngoba sithola izinkulungwane ngosuku.
← Kungani unohlu lwamakheli?
Kuyini ukungamakethi nge-imeyili? →